အပျိုကြီးရဲ့ ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း… – Shwe Pann Thee
Shwe Pann Thee Knowledge အပျိုကြီးရဲ့ ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း…
တစ်ခါတုန်းက အပျိုကြီးတစ်ယောက်၊ ယောကျ်ားသိပ်လိုချင်လွန်းလို့ နာမည်ကြီး ဗေဒင်ဆရာကို အကူအညီ သွားတောင်းသတဲ့၊
” ဒီည သန်းခေါင်ကျော်မှာ ရွာထဲဝင်ပြီး စနည်းနာကြည့်ပါ၊
တစ်ဂဏန်း အသံကြားရင် ၁- လအတွင်းရမယ်။
နှစ်ဂဏန်းအသံကြားရင် ၂ – လအတွင်း ရမယ် စသဖြင့် အတိတ်ကောက်ပေါ့လေ။
ဒါနဲ့ အပျိုကြီးလည်း စနည်းနာ ထွက်သပေါ့၊ ညသန်းခေါင် လူခြေတိတ်ချိန်ဆိုတော့ တစ်ရွာလုံး ဟောက်သံကလွဲလို့တိတ်ဆိတ်နေတယ်။
ရွာအစွန်နားရောက်တော့မှ အဖိုးအိုတစ်ဦး ဘုရားဝတ်တက်သံလို သဲ့သဲ့ကြားတော့ ခပ်သုတ်သုတ်ပြေးသွားပြီး နားထောင်တယ်။
စိတ်ထဲကတော့ အပါယ် ၄- ပါးတို့ ကပ် ၃ -ပါးတို့ဆိုတဲ့အသံ ကြားရရင်တော့ မဆိုးလှဘူး။ စောင့်ရ သုံး လေးလပေါ့ အတွေးလေးနဲ့။
အနားရောက်လို့ အသံကွဲကွဲပြားပြား ကြားလိုက်တာက
” အစိန္တေယျ အစိန္တေယျ အပ္ပမေယျ အပ္ပမေယျ…
လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း… ရှစ်သင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း” !
ဆိုတဲ့အသံကြားလိုက်ရော အပျိုကြီး လက်နှစ်ဖက်နဲ့ နားကိုပိတ် ပြေးတော့တာတန်းနေတာပဲလေ…..
တစ္ခါတုန္းက အပ်ိဳႀကီးတစ္ေယာက္၊ ေယာက်္ားသိပ္လိုခ်င္လြန္းလို႔ နာမည္ႀကီး ေဗဒင္ဆရာကို အကူအညီ သြားေတာင္းသတဲ့၊
” ဒီည သန္းေခါင္ေက်ာ္မွာ ႐ြာထဲဝင္ၿပီး စနည္းနာၾကည့္ပါ၊
တစ္ဂဏန္း အသံၾကားရင္ ၁- လအတြင္းရမယ္။
ႏွစ္ဂဏန္းအသံၾကားရင္ ၂ – လအတြင္း ရမယ္ စသျဖင့္ အတိတ္ေကာက္ေပါ့ေလ။
ဒါနဲ႔ အပ်ိဳႀကီးလည္း စနည္းနာ ထြက္သေပါ့၊ ညသန္းေခါင္ လူေျခတိတ္ခ်ိန္ဆိုေတာ့ တစ္႐ြာလုံး ေဟာက္သံကလြဲလို႔တိတ္ဆိတ္ေနတယ္။
႐ြာအစြန္နားေရာက္ေတာ့မွ အဖိုးအိုတစ္ဦး ဘုရားဝတ္တက္သံလို သဲ့သဲ့ၾကားေတာ့ ခပ္သုတ္သုတ္ေျပးသြားၿပီး နားေထာင္တယ္။
စိတ္ထဲကေတာ့ အပါယ္ ၄- ပါးတို႔ ကပ္ ၃ -ပါးတို႔ဆိုတဲ့အသံ ၾကားရရင္ေတာ့ မဆိုးလွဘူး။ ေစာင့္ရ သုံး ေလးလေပါ့ အေတြးေလးနဲ႔။
အနားေရာက္လို႔ အသံကြဲကြဲျပားျပား ၾကားလိုက္တာက
” အစိေႏၲယ် အစိေႏၲယ် အပၸေမယ် အပၸေမယ်…
ေလးသေခ်ၤနဲ႔ ကမာၻတစ္သိန္း… ရွစ္သေခ်ၤနဲ႔ ကမာၻတစ္သိန္း” !
ဆိုတဲ့အသံၾကားလိုက္ေရာ အပ်ိဳႀကီး လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ နားကိုပိတ္ ေျပးေတာ့တာတန္းေနတာပဲေလ…..
အအေးလှိုင်း ဖြစ်စဉ် တဖြည်း ဖြည်း အားကောင်းလာ၊ ဆောင်းတွင်း အအေး ပိုမည်…အအေးလှိုင်း ဖြစ်စဉ် တဖြည်း ဖြည်း အားကောင်းလာ၊ ဆောင်းတွင်း အအေး ပိုမည်…
အအေးလှိုင်း ဖြစ်စဉ် တဖြည်း ဖြည်း အားကောင်းလာ၊ ဆောင်းတွင်း အအေး ပိုမည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ ရဲ့ လေထု အညွန်းကိန်းနဲ့ ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်က ပုံမှန်ထက်ကျော်လွန်ပြီး ပိုအေးလာလို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆောင်းရာသီအတွင်း အအေးဓာတ် ပိုလာနိုင်တယ်လို့ ...